Dhismaha barlamaanka Iswiidhan.
Masawirqaade: Melker Dahlstrandt
Xukuumada waxeey lee dahay awooda go’aan fulinta. Mecnaheed waa in xukuumada saaran tahay mas'uuliyada fulinta hawlgallada maalmeedka qaranka. Taasi mecnaheed waa tusaale in xukuumada soo bandhigto miisaaniyada dowlada iyo habka loo isticmaalaayo lacagta dowlda, hoggaaminta wasaarada difaaca, arrimaha siyaasada dibadana mas'uul kala noqoto barlamaanka. Waxaa dowlada caawiyo Xafiiska xogheeynta dowlada oo shaqaaledowladeed ka shaqeeyaan.
Justitia, eebaha cadaalada sida ee aaminsanaayeen dadka room. Miisaanka waxuu calaamad uu yahay cadaalad, seeftuna calaamad uu tahay awood. Duubkaindhaha waxuu muujinaa in ee dadka farqi ku sameeyneeyn, taasi oo calaamad uu ah in dadka dhan sharciga uu wada siman yahay.
Barlamaanka-Yurub ee magaalada Bryssel.
Midowga Yurub wuxuu leeyahay saddex hay’ado oo wadajir sharciyada u dejiya: Guddiga Yurub (Europeiska kommissionen), Baarlamaanka Yurub (Europaparlamentet) iyo golaha wasiirradaha Yurub (Europeiska unionens råd). Seddexduba waxay xarun ku leeyihiin magaalo madaxda wadanka Beljum ee Bryssel iyo wadanka Luksemburg. 28 dal ee xubnaha ka ah Midowga Yurub, waxay u wada shaqeeyaan seddex hab oo kala duwan:
Go’aan waajib ku ah in dhammaan dalalka Midowga Yurub xubno ka ah ay raacaan. Go’aamadaas waxa kamid ah sharciyada Midowga Yurub ay wadajir u soo dejiyeen. Sharciga Midowga Yurub wuxuu ka sareeya sharciga dalka xubin ka ah dalkiisa u degsan. Sharciyada badankood waxay ku saabsan yihiin fududaynta ganacsiga, socdallada iyo ka shaqaysashada dalalka xubin ka ah Midowga Yurub. Waxaa jirto Maxkamad dejinta sharciyada Midowga Yurub u gaar ah. Waxaa lagu magacaabaa Maxkamadda Midowga Yurub waxayna ku taalaa dalka Luksemburg.
Wada-shaqayn ikhtiyaari ah oo ka dhaxeeyaa 28 dal ee xubnaha ah, iyadoo sharci la tixraacin. Tusaale ahaan, markii Midowga Yurub u go’aan ka gaaro siyaasadda dibada iyo waxkaqabadyo militeri ah, waxay go’aanadaas ku salaysan yihiin heer-talis dhexaad.